WASIIRKII WAXBARASHADA SOMALILAND OO LA BEDELEY – Somali Schools
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa muddo sanad ah kaddib isku shaandheeyey Golahiisa wasiirrada.
Wareegto ka soo baxday Xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in qaar ka mid ah wasaaradaha dawladda Somaliland la isku shaandheeyey, iyadoo xubnaha xilalka cusub loo magaacabayna ay ka mid yihiin laba haween ah.
Xubnaha uu madaxweynaha maanta magacaabayna waxay kala yihiin:
1) Cusmaan Aadan Jaamac: waxaa loo magacaabay wasiirka cusub ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska.
2) Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (faratoon): oo ahaa wasiirkii hore ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska waxaa loo magacaabay Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah.
3) Dr Sacad Cali Shire: Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda waxaa loo magacaabay Wasiirka cusub ee Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda.
4) C/qaadir Maxamuud Shekh Muxumed dhagaweyne: wasiir ku xigeenkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Waxaa loo magacaabay Wasiir ku xigeenka cusub ee Maaliyadda iyo Iskaashiga Dhaqaalaha.
5) Daahir Axmed Furre: Wasiir ku xigeenkii hore ee wasaaradda Maaliyadda Waxaa loo magacaabay wasiir ku Xigeenka cusub ee Wasaaradda waxbarashada iyo Sayniska.
6) Axmed Abokor Maxamed: Agaasimihii hore ee Wasaaradda Maalgashiga waxaa
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada Somaliland
loo magacaabay Agaasimaha cusub ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska.
7) Yuusuf Max’ed Cabdi, Wasiirkii hore ee Maaliyadda, iyo Professor Maxamed Faarax Xareed, Agaasimihii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo Sayniska, Waxay labadooduba noqonayaan Xubno sare oo ka tirsan guddiga Tacliinta sare ee Somaliland.
Madaxweyne Muuse Biixi tani iyo inta xilka madaxweynanimada loo doortay waxaa lagu dhaleeceynayey inuu dumarka xilal uu u magacaabin, madaxweynaha oo ka jawaabaya cabshada haweenka wuxuu magacabay laba xubnood oo dumar ah.
8) Deeqa Cabdi Yuusuf: waxaa oo loo magacaabay Agaasimaha Guud ee cusub ee Wasaaradda Maalagashiga iyo
9) Faadumo C/llaahi Cumar: Guddoomiya ku xigeenka cusub ee Hay’adda Qoxootiga iyo Barakacayaasha Somaliland.
Tobankaasi xubnood ayuu Madaxweyne Muuse Biixi uu si rasmi ah uu xilalkaa ugu magacaabay.